ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းထဲ နျူကလီးယားဗုံး ဖောက်ခွဲလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ .. ? | XYZ NEWS
ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းထဲ နျူကလီးယားဗုံး ဖောက်ခွဲလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ .. ?
November 8, 2019 - by Editor a
ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ နိုင်ငံမှာ ခံစားကြုံတွေ့မြဲဖြစ်တဲ့ ဟာရီကိန်း ဘေးဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရေး ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအတွင်း နျူကလီးယားဖောက်ခွဲပြီး မုန်တိုင်းကို ချေဖျက်ပစ်ပါလားဆိုပြီး အကြံပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြံပေးချက်ကို တုံ့ပြန်ပြီး INSH သတင်းက ရေးသားရာမှာ-
ခင်မင်ရသော မစ္စတာ ထရမ့်
နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဆီ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဒါဇင်ဝက်မက ၀င်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လေပြင်းထန်ပြီး ရေကြီးမှုတွေဖြစ်လို့ အိမ်ခြေတွေ ပျက်စီးရတယ်၊ အသက်အိုးအိမ်တွေ ပြိုကွဲရပါတယ်။
ဒီလို မုန်တိုင်းရပ်ဝန်းမှာ အသက်ရှင်ရုန်းကန်ရတာထက် ကုန်းတွင်းပိုင်းဆီ မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်ဘူးဆိုရင်၊ ဟာရီကိန်းတွေကို တားမြစ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲ။ မုန်တိုင်းအတွင်း နျူလကီးယား ဖောက်ခွဲပြီး မုန်တိုင်းကို ချေဖျက်မယ်ဆိုတာ အဖြေပါလား။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ရင် နျူကလီးယားကမ္ဘာပျက်ကပ် ဖြစ်လာမလား။ တကယ်ပဲ မုန်တိုင်းကို တားဆီးနိုင်မလား။
ပထမဆုံး ပြောလိုတာက ဟာရီကိန်းဆိုတာ ဘာလဲ။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေဆို အီကွေတာအနီး ပူနွေးတဲ့ သမုဒ္ဒရာရေပြင်မှာ ဖွဲ့တည်တဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးတွေပါ။ ဟာရီကိန်းတွေဟာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ ဖွဲ့တည်ဖို့အတွက် ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်ဟာ ရ၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ရှိရပါတယ်။ အဲဒီ အပူချိန်နဲ့ ရေပြင်ဟာ လေထုကို စိုထိုင်းစ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလို စိုထိုင်းစကြောင့် လေပူဆန်ကြောတွေဖြစ်လာကာ မုန်တိုင်းတိမ်တိုက်တွေကို ဖွဲ့တည်စေပါတယ်။ ဖွဲ့တည်တဲ့ မုန်တိုင်းတိမ်တိုက်တွေ အပြင်ဖက်က ပေါ့ပါးတဲ့ လေထုက သူတို့ကို ရွေ့လျားစေသလို ပိုပြီး ကြီးထွားလာစေပါတယ်။
အဲဒီ ဖြစ်စဉ်စက်ဝိုင်းဟာ မုန်တိုင်းရဲ့ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ရ၄ မိုင်ရှိတဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဒီအဆင့်ကိုတော့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်တည်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ဒီ မုန်တိုင်းတွေရဲ့ အချင်းဟာ မိုင်တစ်ရာနီးပါး ပုံမှန်ရှိလေ့ရှိပြီး တက္ကဆက်ပြည်နယ်တစ်ခုစာလောက်ကို ကြီးမားနိုင်ပါတယ်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့ခြမ်း ဒါမှမဟုတ် အတ္တလန္တိတ်အပေါ်မှာ ဖွဲ့တည်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေကို အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းတွေလို့ ခေါ်ပြီး အရွယ်အစားအားဖြင့် ဟာရီကိန်းအဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတ်ယ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း ဒီမုန်တိုင်းတွေ ကုန်းတွင်းဆီ မဝင်စေလိုပါ။ ခင်ဗျားလည်း မုန်တိုင်းတွေကို မလိုလားဘူးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် တကယ့်ပဲ နျူကလီးယားနဲ့ ဖောက်ခွဲပစ်မှာလား။
ယုံချင်မှ ယုံပါ။ ဟာရီကိန်းကို နျူကလီးယားနဲ့ ဖောက်ခွဲမယ့် အိုင်ဒီယာဟာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါ။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယာဟောင်းပါ။ဒီ အိုင်ဒီယာက ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ ရေအောက်ကနေ ရေငုပ်သင်္ဘော မုန်တိုင်းမျက်စိအထိ ခုတ်မောင်းသွားလာမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီကနေ နျူကလီးယား ပစ်လွှတ်မယ်၊ ဖောက်ခွဲပစ်ပြီး လေပူဆန်ကြောတွေကို ဖယ်ရှားကာ လေအေးတွေ ၀င်ရောက်လာပြီး မုန်တိုင်းကို ဖြိုပစ်မယ်ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေအေးတွေဟာ လေပြင်းထန်မှုကို နှေးသွားစေပြီး ဟာရီကိန်းကို ရပ်တန့်သွားစေမယ်လို့ ဆိုတာပါ။ ကောင်းပါပြီလေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အိုင်ဒီယာအတိုင်း ဟာရီကိန်းကို နျူကလီးယား ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။ ဟာရီကိန်းက ဆက်ရှိနေမှာပါ။ ဒါဟာ ကောင်းတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာက ဟာရီကိန်းကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကြောင့်ပါ။
အမျိုးသား သမုဒ္ဒရာနှင့် လေထုစီမံရေးရာဌာနရဲ့ အဆိုအရ ဟာရီကိန်းက ထုတ်လွှတ်တဲ့ အပူချိန်ဟာ မိနစ် ၂၀ တိုင်း ပေါက်ကွဲတဲ့ ၁၀ မီဂါတန်နျူကလီးယားဗုံးနဲ့ ညီမျှတယ် ဆိုပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က လူတွေအားလုံးအသုံးပြုတဲ့ စွမ်းအင်စုဟာ ဟာရီကိန်း တစ်လုံးတည်းက ထုတ်လုပ်တဲ့ စွမ်းအင်ရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတောင် နည်းပါးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ဗုံးတွေဟာ ဟာရီကိန်းကို ချေဖျက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ဖောက်ခွဲခဲ့ရင် ဟာရီကိန်းဟာ ရေဒီယိုဓာတ်၊ ပလူတိုနီယံနဲ့ အခြား ဖျက်ဆီးစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေကို လေထဲကနေ ကုန်းတွင်းပိုင်းထိ သယ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝ ဟာရီကိန်းတွေဟာ ဒီ လောက်မဆိုးသေးပေမယ့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု ပါလာမယ့် ဟာရီကိန်းဟာ အမေရိကန်ကို ဖြတ်သန်းတို်က်ခတ်သွားမယ််ဆို မြို့ပြတွေ ပျက်စီးပြီး ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်တွေပါ သင့်ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ နောက်တစ်ခေါက် ကြိုးစားကြည့်ဦးမလား။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပိုကြီးမားတဲ့ နျူကလီးယားဗုံးနဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ ဆိုလိုတာ တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ ဗုံးနဲ့ပါ။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးကို ရပ်တန့်နိုင်လောက်အောင် ကြီးမားရပါတယ်။ ဒီအတွက် သမ္မတ၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အက်တမ်ဗုံး အလုံးရေ ၁၀၀ လောက်တော့ လိုလိမ့်မယ်။
ဒီလမ်းစဉ်ပဲ ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဗုံးအားလုံးကို ဗုံးကြီးတစ်လုံးအဖြစ် ဖန်တီးရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အကြီးစားဗုံးကြီးနဲ့ ဖောက်ခွဲရင်တော့ ဟာရီကိန်းက ရပ်တန့်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖုန်အမှုန်အမွှား ထုထည်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့အခါမှ ခင်ဗျားဟာ ကမ္ဘာ့ဂေဟလည်ပတ်မှုစနစ်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဆိုတာ ခင်ဗျား သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီနည်းလမ်းကို ဘယ်လိုပဲ သုံးတာဖြစ်ပါစေ ဟာရီကိန်းကို နျူကလီးယားဗုံးခွဲတာဟာ အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကံမကောင်းရင် ဟာရီကိန်းတွေဟာ ဆက်လက်များပြားလာနိုင်တယ်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင်း သမုဒ္ဒရာ ပူနွေးလာမှုဟာ ဟာရီကိန်းတွေကို ပိုပြီး အင်အားပြင်းထန်စေသလို ပိုပြီး များများစားစား ဖြစ်တည်လာနေစေတယ်လို့ သုတေသနပညာရှင်တွေက ပြောထားပါတယ်။ဒီ ပြဿနာဟာ နျူကလီးယားက အဖြေမဟုတ်ပါ။ နျူကလီးယားရဲ့ ဟာရီကိန်းကို ချေဖျက်တာဟာ အိုင်ဒီယာကောင်းမဟုတ်ပါ။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အံ့သြသင့်ဖွယ် မက်ဒီဘာ့ ရေတံတား
” တစ်မိနစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ၀င်ငွေရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ့အချမ်းသာဆုံး မိသားစု “
ရာစုနှစ်အတွင်း ငါးမန်းကိုက်ပြီး သေဆုံးသူဦးရေထက် ခြင်ကိုက်ပြီး သေဆုံးသူ ဦီးရေက ပိုများ